CMO-on-the-Go: Sidee Gig Workers uga Faa'iidaysan karaan Waaxdaada Suuqgeynta | Martech Zone
Celceliska muddada hawlgalka CMO waa uun 4 sano- kan ugu gaaban C-suite. Sababta Cadaadiska lagu hayo ujeedooyinka dakhliga, gubashadu waxay ku xigi doontaa lama huraan. Taasi waa halka shaqada gigtu ka timaaddo. Ahaanshaha CMO-on-the-Go waxay u oggolaaneysaa Madaxa Suuqa in ay dejiyaan jadwal u gaar ah oo ay qaataan oo keliya waxa ay og yihiin in ay xamili karaan, taas oo keeneysa shaqo tayo sare leh iyo natiijooyin wanaagsan oo xagga hoose ah.
Hase yeeshe, shirkaduhu waxay sii wadaan sameynta go'aannada istiraatiijiyadeed ee muhiimka ah iyada oo aan laga faa'iideysan aragtida CMO, in kasta oo ay khibrad u leeyihiin kor u qaadista dakhliga shirkadda ay miiska keenaan. Taasi waa meesha shaqaalaha gig-ga heer-fulineed u yimaadaan inay ku ciyaaraan. Waxay u adeegi karaan sidii CMO loogu talagalay noocyada waqti dhiman, iyagoo kaydinaya sumcadda qarashka shaqaalaynta CMO oo ay u dhowdahay kaliya dhawr sano oo gaaban.
Riwaayad yar oo loo yaqaan 'CMO gig' ayaa ka duwan la-taliye ahaan; waxay ka kooban tahay la macaamilidda 'C-suite' iyo looxyada oo qayb ka ah kooxda, iyadoo si qoto dheer loogu dhex milmayo hawlgallada maalinlaha ah. Ka CMO ahaan kaqeyb qaadashada dhaqaalaha, waxaan leeyahay masuuliyado muraayad u ah kuwa CMO-waqti-buuxa ah. Waxaan u hogaamiyaa kooxaha suuq geynta si aan u gaaro himilooyinka istiraatiijiga ah uguna warbixiyo agaasimaha guud Waxaan tan ku sameeyaa oo keliya qaab jajab ah. Sida shaqaale badan oo dhaqaalaha ka shaqeeya, waxaan ka helay shaqooyin shabakadda xiriirka ee aan horumariyo markii aan ku sii socday waddo dhaqameed dhaqameed, oo ay ku jiraan in aan ka ahaano qaybta yar ee loo yaqaan 'CMO' ee Abuelo, Waaxda cookie-ka iyo kuwa kale.
Maxaa Gig Shaqaalaha?
Mid ka mid ah su'aalaha badanaa la is weydiiyo ee la i waydiiyo ayaa ah: Maxay shaqaalaha gigtu u keenaan waaxyaha suuq geynta? Faa'iidada ugu weyn ee jirta ayaa ah in qof riwaayad ah ay soo bandhigto aragti cusub markay ku biirto koox shaqaale waqti dheer ah. Nidaamkani wuxuu bixiyaa kan ugu fiican labada adduun - "indho cusub" oo laga helo soo galootiga iyo aqoonta hay'adeed ee kooxda waqtiga buuxa.
Sida laga soo xigtay PayScale, mushaarka dhexe ee CMO waa $ 168,700. Shirkado badan, bilowga gaar ahaan, ma awoodi karaan inay qof ku kiraystaan ​​mushaharkaas waqti buuxa, laakiin gigto CMO waxay keeni kartaa isla sannado khibrad iyo hoggaamineed qiimo aad u hooseeya. Haddii kooxda suuq-geynta joogtada ahi ay iska caabbiso duufaanka ah in loola dhaqmo gig-ga loo yaqaan 'CMO' sidii qof bannaanka ka ah oo ay ku lug leedahay qayb-qayb ka mid ah dhammaan go'aammada la xidhiidha, shirkaddu waxay heli doontaa faa'iidada buuxda ee xirfadle khibrad leh oo dhammaystiran iyada oo aan la helin qiimeyn culus.
Faa'iido kale ayaa ah in heshiis weyn loo oggol yahay shirkadaha iyo hawlwadeennada inay tijaabiyaan wadista xiriir joogto ah. In kasta oo shaqaale badan oo gig ah (sida aniga oo kale) ay si qumman ugu qanacsan yihiin inay ku shaqeeyaan qandaraas isla markaana ay qiimeeyaan dabacsanaanta iyo kala duwanaanta, kuwa kale waxay u badan tahay inay ku madadaaliyaan imaatinka guddiga waqtiga buuxa booska saxda ah. Diyaarinta gig waxay u oggolaaneysaa labada dhinacba inay sahamiyaan taas ka hor intaanay ballan qaad samayn.
Tilmaamaha CMOs ee Raadinta Ku Meel Gaarka ah
Haddii aad tahay CMO oo aad bilowdo inaad dareentid gubasho, waxaa laga yaabaa inay noqoto waqtigii la baari lahaa sida aad ugu keeni karto khibradahaaga suuq-geynta shirkadaha heshiis qandaraasle ah. La xiriir asxaabtii hore una ogeysii inaad xiiseyneyso shaqo weyn. Ha ilaawin inaad ku darto iibiyayaashaaga wacyigelintaada - waxay caadi ahaan leeyihiin aragti gudaha ah oo ururo badan leh waxayna ku siin karaan hoggaan marka bixitaanka fulinta ay keento kursi furan.
Mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee lagu sheegay shaqooyinka iskaa wax u qabso waa dakhliga aan la saadaalin karin. Kahor intaadan quusin, hubi inaad u diyaar garowday hoos u dhaca dhaqaalaha iyo qulqulka sida lama huraanka ah uga dhaca shaqada shaqooyinka iskaa ah. Hubso inaad u diyaar garowday dhaqaale ahaan iyo shucuur ahaanba inaad hore u sii marto inta lagu jiro xilliyada cakiran. Marka xirfadlaha suuqgeynta ahi soo galo dhaqaalaha gig iyadoo indhaha la kala qaadayo, waxay noqon kartaa nolol si la yaab leh u qancisa oo abaal marin leh.
Markay ururadu isku duubnaadaan faa'iidooyinka shaqaalaynta maamulayaasha suuq-geynta ee madax-bannaan, xiriirku wuxuu noqon karaa mid si wadajir ah waxtar u leh. Gig CMOs waxay bixin karaan aragtiyo cusub, khibrad la awoodi karo iyo saameyn togan oo xagga hoose ah. Dhanka kale, shaqaalaha gig wuxuu leeyahay dabacsanaan, shaqo abaalmarin iyo gubasho yar.
Tags: madaxa suuq geyntacmokireysi kirocmo socdadhaqaalaha qosolkashaqaalaha gig
Ka gudubka Baarayaasha: Sida Loo Helo Xayeysiiskaaga Oo La Arkay, Guji, Iyo Waxka Qabashada